Vatyairi veMarori Kusanganisira vekuZimbabwe Vobatwa neCoronavirus kuBotswana
Mutungamiri wenyika yeBotswana VaMokgweetsi Masisi
Vatyairi vemagonyeti anoenda kunyika dziri kuchamhembe kweAfrica vave kutyira kurasikirwa nemabasa sezvo dzimwe nyika dzakaita seBotswana dzave kuti ongororo yadzo inoratidza kuti ndivo vanenge vari kuuya nechirwere charura pasi rose checovid19.
Botswana inoti vanhu zana nemakumi manomwe nevashanu (175) vabatwa neCOVID-19 munyika iyi asi zvikamu makumi masere kubva muzana zvevanhu ava vasiri zvizvarwa zvenyika iyi. Vakawanda vabatwa nechirwere ichi vanotyaira marori vamwe vacho zviri zvizvarwa zveZimbabwe.
Vachitaura nevatori venhau nhasi mangwanani, mutevedzeri wechikwata chiri kutungamira kurwisa kweCOVID-19 chePresidential COVID-19 Task Force Team, VaMosepele Mosepele vanoti vagari venyika iyi makumi matatu nevanomwe chete ndivo vakabatwa nechirwere ichi.
Nekudaro, bazi rinoona nezvehutano muBotswana rave kusomesera zvikuru vanhu vanenge vachida kupinda munyika iyi izvo zvopawo kuti kupinda kana kubuda munyika iyi kunetse.
Kunze kwekutora nguva yakareba vari pamabhodha enyika iyi, mumwe mutyairi wemagonyeti, VaNelson Mundare vaudza Studio 7 kuti vave kugara vakabatira hura mumaoko sezvo Botswana yave kurambidza vamwe vavo kupinda munyika iyi.
Mumwewo mutyairi wemagonyeti, VaMoses Kanjanda vanoti vatyairi vanoshandisa bhodha reRamokgwebana kudivi reBotswana riri pedyo nerePlumtree kuZimbabwe ndivo vari kuoneswa ndondo.
Asi VaDavid Abram, avo vanotyaira magonyeti anoenda kuNamibia vachipfuura nemuBotswana vanoti Botswana iri kuzvisikira moto muziso nekunonotsa vatyairi ava pamabhodha sezvo ichi rarama nezvinhu zvainotenga kubva kune dzimwe nyika.
Asi nyanzvi munyaya dzezvehutano VaDominic Sambo vanoti hapana chakaipa pamatanho ari kutorwa neBotswana kuyedza kumisa kupararira kwechirwere ichi.
MuBotswana munhu mumwe chete ndiye afa nechirwere checovid19 kusvika parizvino uye vanhu makumi maviri nevapfumbamwe ndivo vapora.
Mutungamiri wenyika yeBotswana VaMokgweetsi Masisi vanombopotawo vachiti vakabuda kunze kunoita misangano nevatungamiri venyika dzemuSADC vombogara mumba kuti vaone kuti havana chirwere ichi.